YEYINTNGE(CANADA): Thursday, August 25
Jack Layton အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၀မ်းနည်းကြောင်းသ၀ဏ်လွှာ
Suu Kyi sending condolences message for Jack Layton
Daw Aung San Suu Kyi, General Secretary of National League for Democracy (NLD), has sent the following condolences message to family and colleagues of Mr. Jack Layton.
"To loseagood friend isagreat tragedy. But Jack Layton can never be lost to us because he has left behindalegacy of love, hope and optimism with which we can continue his work to change the world for the better. "Our deepest condolences go out to his family and friends, his colleagues, his party and to all Canadians. We are confident that the people of our two countries will be the richer and closer together because Jack Layton has lived."
The state funeral of Mr. Jack Layton is planned on Aug. 27 this Saturday in Toronto and his body now lies in state at the Centre Block on Parliament Hill, Ottawa.
Daw Aung San Suu Kyi's message was delivered this morning Aug. 25.
MP Olivia Chow is comforted by her stepson Mike Layton as they watch the coffin of NDP Leader Jack Layton leave Parliament Hill for Toronto on August 25. (Ryan Remiorz/CP)
Layton’s casket is carried from Parliament Hill on the shoulders of RCMP officers. (Ryan Remiorz/CP)
Layton leaves Parliament Hill for last time as funeral procession heads for Toronto
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/25/2011 1 အကြံပြုခြင်း
အ မေ စု အ ကြောင်း ရိုက် ထား တဲ့ The Lady ရုပ် ရှင် ကြော် ငြာ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/25/20110အကြံပြုခြင်း
25 August 2011 Yeyintnge's Diary
တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ Sinhydro Bureau မှ ရိုက်ကူးထားသည့် မြစ်ဆုံ ရေကာတာစီမံကိန်း
ရုပ်ထွက်မကောင်းသည့် ကားစုတ်များကို စာရင်းကောက်နေ
Published on August 25, 2011 by ရွှေအောင်
ဟောင်းနွမ်းလွန်းပြီး ရုပ်ထွက်မကောင်းတဲ့ ကားတွေကို ကုန်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ကညန)က ရန်ကုန်မှာ စာရင်းကောက်ယူနေတယ်လို့ အဲဒီဌာနနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
“ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အရမ်းဟောင်းလွန်းတဲ့ ကားတွေကို လိုက်စာရင်းကောက်တယ်။ ကညနက ပြောတာ အဲဒါတွေ စာရင်းပြုစုနေတယ်။ သူတို့ ခေါ်တာက ရုပ်ထွက်မကောင်းတဲ့ ကားလို့ ပြောတယ်။ အခု ကောက်တာက နံပါတ်နဲ့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ကားက မော်ဒယ်ဟောင်းတယ်၊ နံပါတ် နိမ့်သော်လည်းပဲ အနေအထားကောင်းရင် သူတို့ အခေါ်တော့ ရုပ်ထွက်ကောင်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ တချို့ကတော့ ကြည့်လိုက်ရင် ၁/က တို့ စုတ်ပြတ် နေပြီ ကြည့်လို့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ခွဲခြားပြီး စာရင်းကောက်တယ် အဲဒီလို ကြားတယ်။”
အဲ့ဒီလို စာရင်းကောက်ယူပြီး ရုပ်ထွက်မကောင်းတဲ့ ကားတွေကို နယ်နှင်မယ် ဆိုတဲ့သတင်းလည်း ထွက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကားဝယ်ရောင်း တဦးကတော့ ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေသေးတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ လိုင်စင် ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာမို့ မြို့တွင်းက ကားဟောင်းတွေ အရင်ရှင်းထုတ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလ ၁၆ ရက်မှာ သမ္မတနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ တွေ့တုန်းက လုပ်ငန်းရှင်တချို့က ကားတင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့ တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ သမ္မတက ပို့ကုန်သွင်းကုန် ရငွေသုံးငွေ မျှခြေကိုကြည့်ပြီး စဉ်စားပေးမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း ဒီနေ့ထုတ် Biweekly ဂျာနယ်က ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ အသုံးပြုပြေးဆွဲနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နဲ့အငှားကား အများစုဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း​ မတ်တတ်ရပ် ဆို​တော့​ လွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ်​တွေက ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ သတ္တိ မရှိ​သေး​ဘူး​
တရား​ရုံး​မထီမဲ့​မြင်ပြုမှုဥပ​ဒေ ဖျက်သိမ်း​ရေး​အဆို ရှုံး​နိမ့်​၊ လွှတ်​တော်၌ လျှို့​ဝှက်မဲ​ပေး​စနစ် ပျက်​နေ
Published on August 25, 2011 by အံ့ဘုန်းမြတ်
တရား​ရုံး​များ​အား​ မထီမဲ့​မြင်ပြုမှုဥပ​ဒေ ဖျက်သိမ်း​ဖို့​ အဆိုကို ပြည်သူ့​လွှတ်​တော် အစည်း​အ​ဝေး​မှာ ဒီ​နေ့​ မဲခွဲဆုံး​ဖြတ်တဲ့​အခါ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့​ ရှုံး​နိမ့်​သွား​ပါတယ်။
သင်္ဃန်း​ကျွန်း​ မဲဆန္ဒနယ်​မြေက လွှတ်​တော် ကိုယ်စား​လှယ် ဦး​သိန်း​ညွန့်​ တင်သွင်တဲ့​ ၁၉၂၆ ခုနှစ် တရား​ရုံး​များ​အား​ မထီမဲ့​မြင်ပြုမှုဥပ​ဒေ​တွေကို ဖျက်သိမ်း​ဖို့​ အဆိုကို ကြံ့​ခိုင်​ရေး​ပါတီ ကိုယ်စား​လှယ် ၃ ဦး​က ကန့်​ကွက်​ဆွေး​နွေး​အပြီး​ လွှတ်​တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦး​ရွှေမန်း​က အဆိုကို ပြန်ရုပ်သိမ်း​ဖို့​ ​ပြောကြား​ပါတယ်။
အဆိုရှင် ဦး​သိန်း​ညွန့်​က ပြန်မရုပ်သိမ်း​နိုင်​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​တာ​ကြောင့်​ မဲခွဲ ဆုံး​ဖြတ်ရာမှာ ကန့်​ကွက်မဲ ၃၅၉၊​ ​ထောက်ခံမဲ ၃ မဲ၊​ ကြား​နေမဲ ၂၆ နဲ့​ အဆိုရှုံး​နိမ့်​သွား​ တာလို့​ ပြည်သူ့​လွှတ်​တော် ကိုယ်စား​လှယ်တဦး​က ​ပြောပြပါတယ်။
စက်ခလုတ်နှိပ်ပြီး​ လျှို့​ဝှက်မဲ​ပေး​ပေမယ့်​ စက်ခလုတ်ပျက်​နေလို့​ဆိုပြီး​ ကန့်​ကွက်၊​ ​ထောက်ခံ၊​ ကြား​နေ တလှည့်​စီမတ်တတ်ရပ်ခိုင်း​ပြီး​ မဲ​ရေတွက်တာလို့​ ​ပြောပါတယ်။
“ကန့်​ကွက်တဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ် ထပါဆို​တော့​ တခန်း​လုံး​ပြည့်​ နီး​ပါး​ပဲဗျာ အဓိကက​တော့​ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီဝင်​တွေ​ပေါ့​။ မတ်တက်ရပ်လိုက်တာ​ပေါ့​ဗျာ။ ​နောက်မှ ​ထောက်ခံတဲ့​ ကိ်ုယ်စား​လှယ်​တွေ ထဆို​တော့​ ဦး​သိန်း​ညွန်အပါအဝင် ၃ ​ယောက်ပဲ ရတယ်ခင်ဗျ။”
မတ်တတ်ရပ်မဲ​ပေး​ပြီး​ချိန်မှ ရုပ်မြင်သံကြား​ပေါ်မှာ အ​ဖြေတမျိုး​ပေါ်လာပြန်တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
“အဲဒီလိုလုပ်​နေတုန်း​မှာပဲ အဲဒီ တီဗွီစခရင်က မီး​ပေါ်လာတယ်ခင်ဗျ။ ​ထောက်ခံ တဲ့​လူက ၂၃ ​ယောက်၊​ ကြား​နေတဲ့​လူက ၂၈ ​ယောက်၊​ ကန့်​ကွက်တဲ့​လူက ၃၃၇ ​ယောက် ဆိုပြီး​တော့​ ​ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ဦး​သိန်း​ညွန်က နည်း​နည်း​ ပြန်ပြီး​ပြော​တော့​ အဲဒီ စခရင်က ပျက်​နေတာ စက်ခလုပ်ခုံက ပျက်​နေလို့​ပါတဲ့​ အဲဒီဟာကို အတည်ကိုင်လို့​ မဖြစ် ဘူး​ပေါ့​။ အခု လက်ရှိ ကိုယ်တိုင် မတ်တတ်ရပ်တာပဲ အတည်ခိုင်မာတယ် ဆိုပြီး​တော့​ အဲဒီ အဆိုကို ရုပ်သိမ်း​ခိုင်း​သွား​တယ်ခင်ဗျ။”
လျှို့​ဝှက်မဲ​ပေး​စနစ် ချွတ်ယွင်း​နေတာ​ကြောင့်​ ဥပ​ဒေဖျက်သိမ်း​ရေး​ဘက်က ​ထောက်ခံသူ ပိုနည်း​သွား​တာလို့​လည်း​ အဲဒီလွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ်က သုံး​သပ်ပါတယ်။
“​ထောက်ခံလိုက်တဲ့​လူ​တွေ မတ်တတ်ရပ်လို့​ ​ပြောလိုက်တဲ့​အချိန်မှာ မရပ်ရဲတဲ့​ လူ​တွေ ပါတယ်​ပေါ့​ဗျာ။ ​ပေါ်​ပေါ်ထင်ထင် မလုပ်ရဲတဲ့​လူ​တွေ ပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီက လည်း​ အဲဒီလိ်ု ​ထောက်ခံတဲ့​လူ​တွေ ပါပါလိမ့်​မယ်။ ဒါ​ပေမဲ့​ တကယ်တမ်း​ မတ်တတ်ရပ် ဆို​တော့​ လွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ်​တွေက အဲဒီ​လောက်အထိ ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ သတ္တိ မရှိ​သေး​ဘူး​ ခင်ဗျ။”
အများ​ကပဲ ရပ်ပြီး​တော့​ လုပ်ကြ​ပေါ့​ဗျာ။ ဦး​သိန်း​ညွန်အပါအဝင် ၃ ​ယောက်ပဲ ​ထောက်ခံတဲ့​လူ ထဲမှာ ပါပြီး​တော့​လေ ၂၆ ​ယောက်က ကြား​နေတဲ့​ထဲမှာ ပါတယ်။ ” ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီဝင် အများ​စုဖြစ်​နေတဲ့​ လွှတ်​တော်မှာ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အား​စု ​တွေရဲ့​ အဆို​တွေ ကန့်​ကွက်ခံ​နေရ​ပေမယ့်​ လုပ်သင့်​တာ ဆက်​ဆောင်ရွက်မယ်လို့​ အဲဒီလွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှယ်က ​ပြောပါတယ်။
“မဲဆန္ဒရှင်​တွေကို အသိ​ပေး​ပြီး​တော့​ တကယ်တမ်း​ လုပ်သင့်​ လုပ်ထိုက်တာကို ​တော့​ လွှတ်​တော်မှာ တင်​ပေး​ရမှာ​ပေါ့​။ ဒါမှ ကျ​နော်တို့​ရဲ့​ တာဝန်က ​ကျေမယ်​လေ။ ကြိုက် တာ မကြိုက်တာက​တော့​ အပထား​ပေါ့​ဗျာ။ ကျ​နော်တို့​ လုပ်သင့်​လုပ်ထိုက်တာကို သတ္တိရှိ ရှိနဲ့​လုပ်ဖို့​ လူ​တွေအများ​ကြီး​ရှိပါတယ်။ ”
ဒီ​နေ့​ လွှတ်​တော်အစည်း​အ​ဝေး​မှာ အ​ထွေ​ထွေလွတ်ငြိမ်း​ချမ်း​သာခွင့်​အမိန့်​ ဆက် လက်ထုတ်ပြန်​ရေး​အတွက် သမ္မတကို လွှတ်​တော်က​မေတ္တာရပ်ခံ​ကြောင်း​၊​ ၂၁ ရာစုနဲ့​အညီ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့​ အာမခံချက်ရှိတဲ့​ အကျဉ်း​ထောင်အက်ဥပ​ဒေမူကြမ်း​ ​ရေး​ဆွဲပြီး​ တတိယအ ကြိမ် ပြည်​ထောင်စုလွှတ်​တော်မှာ ​ဆွေး​နွေး​အတည်ပြုနိုင်​ရေး​ စတဲ့​အဆိုနှစ်ရပ်ကိုလည်း​ ဦး​သိန်း​ညွန့်​က တင်သွင်း​ပါတယ်။
အ​ထွေ​ထွေ လွတ်ငြိမ်း​ချမ်း​သာခွင့်​အမိန့်​ ထုတ်ပြန်​ရေး​ အဆိုကို​တော့​ မနက်ဖြန် လွှတ်​တော်မှာ ထပ်ပြီး​ဆွေး​နွေး​မယ်လို့​ သိရပါတယ်။
အိန္ဒိယ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ကို ဓည၀တီ ရေတပ် ဌာနချုပ်မှူးက ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတာ ဘာကြောင့်လဲ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လည်ပတ်ရန် သြဂတ်စ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာသော အိန္ဒိယ ရေတပ် ဦးစီးချုပ်အား ရန်ကုန် လေဆိပ်တွင် ရခိုင် အခြေစိုက် ဓည၀တီ ရေတပ် ဌာနချုပ်မှူးက သွားရောက် ကြိုဆိုခဲ့ရာ အဆိုပါ ကြိုဆိုမူနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားများ အကြားတွင် အမျိုးမျိုး ဝေဖန် ပြောဆိုမူများ ထွက်ပေါ်နေသည်ဟု သိရသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင် အ၀ိုင်းနေ ရခိုင်လူကြီး တစ်ဦးက သူ့ အမြင်ကို ယခုလို နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဓည၀တီ ရေတပ်ချုပ်မှူး ကြိုဆိုနေစဉ် (ဓါတ်ပုံ- ကြေးမုံ)
" ခုကြိုဆိုတာက ဆန်းတော့ တော်တော့ကို ဆန်းတယ်ဗျာ။ ရန်ကုန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက ရခိုင်က ဓည၀တီ ရေတပ် ဌာနချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်အောင်စန်းကို သွားရောက် ဦးဆောင် ကြိုဆိုခိုင်း တယ်ဆိုတော့ ဒါက သာမန်ရိုးရိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုတော့ ရှိပါလိမ့်မယ်။ စစ်ရေးအားဖြင့် ဖြစ်စေ။ ယကြာအရ ဖြစ်စေ လုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခုလို ကြိုဆိုတာက တစ်ခုခုတော့ ထူးခြားမူ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး သတင်းစာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြောနေ ကြပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
အိန္ဒိယ ရေတပ် ဦးစီးချုပ် Admiral Nirmal Vema, PVSM, AVSM, ADC နှင့် ဇနီးဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် သြဂတ်စ်လ ၂၃ ရက် (အင်္ဂါနေ့) ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် ရန်ကုန် လေဆိပ်သို့ အိန္ဒိယ လေတပ် လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ ရခိုင်အခြေစိုက် ဓည၀တီ ရေတပ် ဌာနချုပ် ဌာနချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်အောင်စန်းနှင့် ဇနီးက သွားရောက် ဦးဆောင် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
၎င်းပြင် အဆိုပါ သတင်းအား ယမန်နေ့က ထုတ်ဝေသော ကြေးမုံ သတင်းစာ စာမျက်နာ (၉) တွင် ဖေါ်ပြထားသဖြင့် တိုက်ဆိုင်မူလား သို့မဟုတ် (၉)ဂဏန်းကို ကြိုက်သော စစ်အစိုးရက တမင် စာမျက်နာ ၉ တွင် ဖေါ်ပြပြီး ယကြာချေခြင်းလား ဆိုသည်ကို အများက စိတ်ဝင်တစား သိချင်နေကြရသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံ ကော့ဘဇားခရိုင် သံသီးရွာကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေသော ဗေဒင်၊ အင်္ဂါ ရုပ်လက္ခဏာနှင့် ရခိုင် သမိုင်းသုတေသီ အသျှင် အိန္ဒစက္ကအား လျှောက်ထား မေးမြန်းကြည့်ရာသူက ယခုလို ပြောသည်။
" ဒါကတော့ ဦးဇင်း အမြင်ကို ပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀ ကျော်က အိန္ဒိယ နိုင်ငံ အန်ဒမန်ကျွန်း မှာ ရခိုင်တပ်မတော်က ဗိုလ်ချုပ် ခိုင်ရာဇာနဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး စောထွန်းတို့ကို အိန္ဒိယ ရေတပ်၊ စစ်တပ်တို့ က လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားတွေ ကြားထဲမှာ အိန္ဒိယကို အထူး နာကြည်းနေကြတယ်။ ဒါကို အိန္ဒိယ အစိုးကလည်း သိနေတော့ မြန်မာ အစိုးရက ဗိုလ်ရာဇာတို့ဟာ သူပုန် သောင်းကျန်းသူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရခိုင်တွေ သူတို့သေဆုံးတဲ့ အပေါ်မှာ နမြောမူ နာကျည်းမူ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန် ပေါ်လာအောင် ဖေါ်ပြလိုတဲ့ အတွက် ရခိုင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဓည၀တီ ရေတပ် ဌာနချုပ်မှူးကို ခုလို ကြိုဆိုခိုင်းတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
၎င်းပြင် အသျှင် အိန္ဒစက္ကမှ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေသော မြန်မာ အစိုးရမှာ ယကြာ ဗေဒင် အတိတ် နမိတ်များကို အထူး ယုံကြည်သဖြင့် အဆိုပါ သတင်းကို စာမျက်နာ (၉)တွင် ဖေါ်ပြ ထားခြင်းမှာ တြင်းကျေ န၀င်းကျေ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု နိရဉ္စရာသို့ မိန်းကြားသွားပါသည်။
ဒေါ်လာဈေး ပြန်တက်၊ ယနေ့ မနက် ၇၇၀
by politics on August 25, 2011
အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ သည် ယနေ့ မနက် ဈေးကွက် ဖွင့် ချိန် တွင် ၇၆၅ ကျပ် မှာ ၇၇၀ ထိ
ဈေးပြန် လည် မြင့် တက် ခဲ့ သည် ဟု FNG မှ သတင်း ရရှိ သည်။ ယခု သီတင်းပတ် ဆန်း က
၆၅၀ ထိ ကျဆင်း သွား ခဲ့ သည့် ဒေါ်လာ ဈေးမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့ ညနေ ဈေးကွက် ပိတ်ချိန်
နှင့် ကြာသပတေး နေ့ညများ တွင် ပြန်လည် မြင့် တက်သွား ခဲ့ သည် ဟု သတင်း ရရှိ သည်။
ယမန်နေ့ ညက ၆၅၀ ကျပ် နှင့် ဈေးပိတ် သွား သည့် FEC မှာ လည်း ၆၇၅ ကျပ် သို့ပြန်လည်
မြင့် တက် ခဲ့ သည်။
ဒေါ်လာဈေး ပြန်လည် မြင့်တက်ရခြင်း နှင့် ပတ် သက်ပြီး ရန်ကုန် မြို့ မှ လေကြောင်း ခရီးသွား
လာရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ရှင် တစ်ဦး က ” အခု စီးပွား ရေး သမား တွေ က ဒေါ်လာ ပြန်
၀ယ် နေကြ ပြီလေ ၊ အစိုး ရ ၀န်ကြီး ဌာန တွေ က လည်း မ၀ယ် မနေ ရ တစ်ဌာ န ကို အနဲ
ဆုံး တစ်သိန်း ၀ယ် ရတယ် ” ဟု ပြောသည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဈေးသည် ထပ်မံ ၍ မြင့်တက် လာ နိုင်စရာ အကြောင်း ရှိ သည်မှာ
ဟု ယုံကြည်ရသည် ဟု ကမ္ဘောဇ ဘဏ်မှ အကြီးတန်း ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က ပြောသည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဈေး သည် လစ်ဗျား နိုင် ငံ တွင် ကဒါဖီ ၏ နေ အိမ် ခြံဝန်း ကို သူပုန်
များ သိမ်း ပိုက် ပြီး ချိန် တွင် ကမ္ဘာ့ ငွေကြေး ဈေး ကွက် တွင် ပါ မြင့် တက် လာသည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ သည် လစ်ဗျား သူပုန် များ အောင်ပွဲ ခံ ပြီးနောက် ဂျပန် ယန်း၊ ဥရောပ
ယူရို၊ ဗြိတိသျှ ပေါင်၊ ထိုင်း ဘတ် ၊ တရုတ် ရီမင်ဘီ ငွေကြေး တို့နှင့် နှိုင်း ယှဉ် လျှင် ဈေး
ပြန်လည် မြင့်တက် သွားသည်။
ဒေါ်လာ ဈေး မြင့် တက်ရခြင်း မှာ မြန်မာ အစိုးရ ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကြောင့် မဟုတ် လဲ
အမေရိကန် ဒေါ်လာ တန် ဖိုးကိုယ် ဉ် က ပြန်လည် မြင့်တက် လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်
ဟု ငွေကြေး ကစား သူ တို့က သုံး သပ် ကြသည်။
နိုင်ငံ တကာ တွင် ရွှေ ဈေး နှုန်း မှာ တစ် အောင် စလျှင် ပြီး ခဲ့ သည့် အပတ် က အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ကျော် ရှိ နေရာ မှာ ၁၇၀၀ သို့ပြန်လည် ကျဆင်း သွား သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲလာမှုအပေါ် ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ
ဗုဒ္ဓဟူး, 24 သြဂုတ် 2011
ဒီတပတ် မြန်မာ့အရေး သတင်းသုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်မှာ ဒီနေ့ မြန်မာပြည်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံရေးအဖြေရှာနိုင်မယ့် အရိပ်အရောင်တွေ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေ၊ သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်ချင်ကြတဲ့လူတွေလည်း ရှိသလို၊ အကောင်းမြင်သူတွေလည်း မရှားရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်ထွန်းမှုအလားအလာဟာ အကောင်းဖက်ကို တကယ်ဦးတည်သွားနိုင်ပါသလား ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဦးကျော်ဇံသာ က မြန်မာပြည်ရှိ ဝါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး မောင်ဝံသ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆရာမောင်ဝံသ ခင်များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတော်တော်များများက အကောင်းမြင်တယ်လိုလည်း ပြောကြပါတယ်။ တချို့ ကလည်း အကောင်းမြင်သောလည်း နည်းနည်း ဆိုးတထစ်ထစ်နဲ့ အကောင်းမြင်တာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လို cautious optimism လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဆရာ အမြင်က ဒီကိစ္စအပေါ် ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
မောင်ဝံသ ။ ။ အခု နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြည့်ရသလောက်တော့ တိုင်းပြည်အခြေအနေက ကောင်းလာမယ့် အလားအလာတွေ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စိတ်ချလက်ချ မျှော်လင့်တာလား။ တစုံတရာ စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ အကောင်းမြင်ချင်တဲ့ သဘောလား။
မောင်ဝံသ ။ ။ ကျနော် ထင်မြင်ချက်ကို အလေးချိန်နဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကောင်းလာမယ့် အလားအလာများတယ်ဆိုတဲ့ဘက်က ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ လူတော်တော်များများကတော့ အဲဒီလို cautious ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ သူတို့ ပြောကြတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ဥပမာ အခုလက်ရှိ အာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ အပြောင်းအလဲကို လိုလားတဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ သူတို့က ပြောင်းလဲချင်တဲ့ဆန္ဒကို ပြသနေပေမယ့် သဘောထားတင်းမာချင်တဲ့ လူတချို့ လည်း ရှိသေးတယ်။ သူတို့က သိပ်မပြောင်းလဲချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ မြင်နေကြတယ်လည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
မောင်ဝံသ ။ ။ အဲဒီလို သဘောထားရှိတဲ့လူတွေလည်း အထိုက်အလျောက် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်အမြင်မှာတော့ သူတို့ နောက်ပြန်ဆွဲလိုမရတော့ဘူးပေါ့။ သူတို့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပြေပြေလည်လည်ဖြစ်အောင် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လုပ်သွားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ အင်အားစုကို ပြန်ပြီးမဖြတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ အဲဒီလို မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခုလောလောဆယ်ကတော့ တော်တော်များများ သုံးသပ်ကြတာတော့ တိုးတက်မှုတော့ တစုံတရာ မမြင်ရသေးဘူး။ သို့ပေမယ့် တိုးတက်မှုအတွက် လမ်းစဆွေးနွေးကြတယ်။ တွေ့ဆုံကြတာလောက်ပဲ မြင်ရသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆရာအနေနဲ့ ဒီအချက်ထက် ပိုပြီးတော့ မြင်ပါသလား။
မောင်ဝံသ ။ ။ ကျနော်ကတော့ တိုးတက်မှုတွေကို မြင်နေရတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နေပြည်တော်ဖိတ်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့တယ်။ နောက်တခါ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေတချို့ နဲ့ တွေ့တယ်။ နောက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့တယ်။ အဲဒီဟာတွေက တိုးတက်မှုတွေပဲ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ဒါတွေက မမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုး၊ ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးတွေကို အခုလောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ တခြားလူတွေတော့ မသိဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တော့ အဲဒီလောက်ကို မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါတွေက အခုဖြစ်လာပြီ။ ဒါတွေက တိုးတက်မှုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ တိုးတက်မှုပါ။ ဒါ အရေးကြီးတဲ့ တိုးတက်မှုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော်လည်း ဆရာလို အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့  စိုးရိမ်ကြီးတာလား။ သူတို့ကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့ မရဘူးထင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၄၀) လုံးလုံး ဒီလို ပိတ်ပြီးတော့ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေ မမြင်ခဲ့ရတော့ သူတို့မြင်တာလည်း အဆိုးလို မဆိုသာဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အမြင်ထဲမှာ ဘာပြောသလဲဆိုတော့ အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံ အကျဆုံး urgent ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ (၂) ခုကတော့ နိ်ုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းရေးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုစလုံးဟာ တခုမှ တိုးတက်မှု အရိပ်အရောင် မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတာကို ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီဟာကို စောင့်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုကြပါတယ်။
မောင်ဝံသ ။ ။ ကျနော်လည်း အဲဒီလို ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ဝန်လေးနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အပြစ်မပြောပါဘူး။ ကျနော် ဒီနေ့ထွက်တဲ့ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ကျနော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ အဲဒီအတိုင်းပဲ ရေးထားတယ်။ သံသယရှိနေတဲ့လူတွေ၊ နောက်တခါ မယုံနိုင်သေးတဲ့လူတွေကို အပြစ်တင်စရာ မဟုတ်ပါဘူးလို့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဆယ်စုနှစ် ငါးစုလောက် မယုံစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကို စိတ်ချဖို့ဆိုတာ အတော်ကြီးကို ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လက်တွေ့ပြနိုင်မှပဲ ယုံမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ကြဖို့ဆိုတာကို တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ကျနော်ရေးပါတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စ၊ နောက်တခါ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တာတွေ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးတွေ ဒါတွေက ကျနော်အမြင်မှာတော့ ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ့်ကိစ္စတွေပါ။ တယောက်ချင်း နှစ်ယောက်ချင်း လွတ်နေတာနဲ့ တခါတည်း၊ တသုတ်တည်း ဆောင်ရွက်မယ်လို့ အဲဒီလို ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာမယ့် အလားအလာလည်း ကျနော်စိတ်ထဲမှာ မြင်နေပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စတွေကလည်း လုံးဝဖြစ်လာမယ့်လို့ မျှော်လင့်တယ်ပေါ့။
မောင်ဝံသ ။ ။ ကျနော် တော်တော်ကြီးကို ယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ လုံးဝ amnesty ပေးတယ်ဆိုတာ general amnesty ဘာမှခြွင်းချက်မထားဘဲနဲ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပထမ သမ္မတဦးသိန်းစိန် က တက်လာပြီးတော့ မိန့်ခွန်းပြောတယ်။ နောက် လွတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ တနှစ် လို့ပြောတော့ လူရယ်စရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုထောက်ပြီးတော့ အခုအခါ လူတွေကလည်း လွတ်တယ်ဆိုပြီး ဘယ်သူမပါဘူး၊ ဘယ်လိုလူတွေကို လွတ်တယ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ သံသယရှိကြပါတယ်။
မောင်ဝံသ ။ ။ ဒါကတော့ ကျနော်လည်း အတိအကျ ဟောကိန်းတော့ မထုတ်နိုင်ဘူး။ သို့သော် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပုံစံကျတယ့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပြန်ပြီးလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာက အဲဒီလို ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေ၊ ပြည်တွင်းမှာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ပေးဖို့ဆိုတာ သိပ်ပြီး မခဲယဉ်းတော့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကို ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ပြည်ပက လူတချို့ ကတော့ သံသယရှိတယ်။ ကာတွန်းတခုမှာ ဘယ်လိုတွေ့ရသလဲဆိုတော့ ပြည်ပအင်တာနက်မှာ ပြန့်နှံနေတဲ့ ကာတွန်းတခုမှာ - လှိုက်လှဲဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ် ဆိုတဲ့ စာသားကို အချုပ်ကားမှာ ရေးထားတယ်။ ဆိုတဲ့သဘောက ခေါ်လာပြီးရင် အဲဒီအထဲမှာ ထည့်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ဒါက ဘာကိုဖော်ပြနေသလဲဆိုရင် သူတို့က သံသယရှိနေတယ်၊ မယုံကြည်ရဲဘူးဆိုတဲ့သဘော ပြောနေပါတယ်။
မောင်ဝံသ ။ ။ အဲဒီလို မယုံကြည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ယုံကြည်အောင် လုပ်ဖို့ကတော့ အစိုးရရဲ့  တာဝန်ဖြစ်တယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးတော့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပေးရမှာကတော့ အစိုးရပိုင်ရဲ့  တာဝန်ပါ။ ကျနော်တို့က ဘေးက ခန့်မှန်းခြေ ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ခန့်မှန်းခြေဆိုလို့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး အပြင်ကနေ ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်ပါ။ တကယ် တွေ့တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တွေ့တာ။ သူတို့ကတော့ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကို တွေ့တာ။ ဖော်မပြဘူးဆိုတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်ကနေ သုံးသပ်ကြတာ သူတို့ နှစ်ယောက် အပေးအယူလုပ်ကြရင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ သုံးသပ်မိတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဒီအစိုးရကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက် သူတို့က တောင်းဆိုကောင်းတောင်းဆိုကြလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ပါတီကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်နေပါလို့ တောင်းဆိုကောင်း တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးဖို့ကိစ္စကို အဓိကထား တောင်းဆိုလိမ့်မယ်လို့ တွက်ကြပါတယ်။ ဆရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုတွက်ပါသလဲ။ ဒီအပြင် ဘာတွေ ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဘာတွေ အပေးအယူလုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
မောင်ဝံသ ။ ။ ကျနော်တို့ ဦးကျော်ဇံသာ ပြောသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေက အဓိကပြဿနာတွေ။ အဓိကပြဿနာတွေဆိုတော့ ဒါတွေကို ပါမယ်လို့ ကျနော်လည်း ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက လိုက်လျောနိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိပါသလား။ ပထမဦးဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်က လိုက်လျောရမယ်ဆိုတဲ့သဘော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ တနည်းနည်းလုပ်ပါလို့။ ပါတီကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် ရပ်တည်ကြိုးစားပါလို့ ဆိုတာတွေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လိုက်လျောနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
မောင်ဝံသ ။ ။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ပေးဖို့က အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ တော်တော်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်တွေက ရှိနေတာကို။ အဲဒီတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေ ရှိနေတော့ ပြောစရာတွေ၊ နောက်ကြောင်းလှန်ပြောမယ်ဆိုရင် မဆုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်ထင်တယ် အခက်အခဲတွေ ရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် နှစ်ဖက်လုံးက မျက်နှာမပျက်ဘဲနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးတွေကို ရှာဖို့ကြိုးစားကြမယ်လို့ အဲဒီလို ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ခြွင်းချက်မရှိ လွတ်ပါလို့ ဆိုခဲ့ရင် ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ လွတ်ချင်တယ်ထားအုံးတော့ အစောကပြောခဲ့တဲ့ တင်းမာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကလူတွေက သဘောတူခေါင်းညိမ့်မလား။ အဲဒါကို သံသယရှိတာ မကောင်းဘူးလား။
မောင်ဝံသ ။ ။ ကျနော် မြင်ရသလောက်တော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက အခြေအနေတွေကို ကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဦးဆောင်နိုင်မယ်လို့ အဲဒီလို မြင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သမ္မတကြီးက ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် အကောင်အထည်ဖော်လာလိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စကတော့ သမ္မတ က မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် တခါတည်း ပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ဒီကိစ္စလည်း ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ဘူး ထင်ပါသလဲ။
မောင်ဝံသ ။ ။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကိစ္စထက် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပြီး ပြေလည်မယ့်ကိစ္စက ပိုအရေးကြီးနေတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီကိစ္စမျိုးကို လမ်းတော့ ဖွင့်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်တခုက အခုကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်မှာ ရေးရာကော်မတီဆိုပြီး ဖွဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ (၁၈) ခုဆိုလား။ အဲဒီ ရေးရာကော်မတီ (၁၈) ခုမှာ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရတာ သူတို့ခန့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီဟာထက် လူတွေဘဝင်မကျ ဖြစ်သွားတာကတော့ တချိန်တုန်းက ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ အတော်ကလေး နံမည်ဆိုးထွက်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြန်ပြီးခန့်အပ်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဟာ သံသယပိုကြီးလာတယ်လို့ ဗမာပြည်အတွင်းက သုံးသပ်ကြသူတချို့ က ပြောဆိုကြပါတယ်။
မောင်ဝံသ ။ ။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို တွေ့ကြတယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒါကို ဝေဖန်ကြမှာပဲ။ ဝေဖန်တာကို ဟုတ်မဟုတ်ကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ပြင်သင့်ပြုပြင်သင့်တာကို လုပ်သင့်တယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော်နောက်ဆုံး မေးချင်တာကတော့ တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောတူညီချက်ရပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ အဲဒီလို ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောတူညီမှုမရကြလို့ သွေးထွက်သံယိုးဖြစ်ပြီး အတင်းပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း အများကြီး ကမ္ဘာမှာ တွေ့နေကြရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အခြေအနေနဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ စဉ်းစားတဲ့အထဲမှာ ဘယ်လောက်ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြလိမ့်မလဲ။ ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကမ္ဘာနဲ့ မြန်မာအခြေအနေကို ယှဉ်ထိုးပြီးတော့ စဉ်းစားမယ်လို့ တွက်ပါသလား။ သို့မဟုတ် မြန်မာစစ်ဗိုလ် အဆက်ဆက်ပြောသလို မြန်မာနိုင်ငံဟာ unique ဖြစ်တယ်။ သူများနဲ့ မတူဘူးဆိုပြီး သူတို့သဘောအတိုင်း ထင်ပါသလား။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ထိုးစဉ်းစားကြမယ် ထင်ပါသလား။
မောင်ဝံသ ။ ။ လက်ရှိ အနေအထားမှာ အဲဒီလို အနေအထားမျိုး၊ အခြေအနေမျိုး မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခု ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တာနား လာတယ်။ အရင်ကဆို မစ္စတာ ကင်တာနားကို ပြည်ဝင်ခွင့်တောင် မပေးခဲ့ဘူး။ အခုတော့ သေချာလက်ခံတယ်။ နေပြည်တော်မှာ လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတယ်။ ဆွေးနွေးတယ်။ နောက်ပြီး မစ္စတာကင်တာနား အကြံပေးတာတွေ၊ ဆွေးနွေးတာတွေကို သေချာနားထောင်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ရှိလာတော့ နိုင်ငံတကာရဲ့  သဘောထား၊ ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း အလေးထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ လက်တွေ့ စီရင်ခဲ့ရတာပေ့ါ။ နောက်တခုက ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ပိုပြီးအသိအမြင် ဗဟုသုတတွေ တော်တော်လေး ကျယ်ပြန့်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ပြည်သူတွေက နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုတွေ ရှိလာမယ်။ နိုင်ငံရေးအမြင်တွေ ရှိလာမယ်။ ဒီအပေါ်မှာ တနွယ်ငင် တစင်ပါ ဆိုသလို အခြေအနေတွေ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာမယ့်သဘော ရှိပါတယ်။ ဥပမာတခုပြောမယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းကဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကို ပြောဖို့တောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် လေသံနဲ့ ပြောရတာတွေရှိတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုကြတယ်။ ဘာမှ ကြောက်ကြောက်ရွံရွံ မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ သူ့အကြောင်းကို ပြောကြတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့တယ်။ တချို့  တက္ကစီကားတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံတွေ ချိတ်ထားတာတွေ တွေ့ရပြီ။ အရင်တုန်းကဆို ဒါမျိုးတွေ ဘယ်လုပ်ရဲပါမလဲ။ အဲဒါ အခုဆိုရင် တက္ကစီကားတွေမှာ ချိတ်တယ်။ တချို့  လဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံတွေကို ချိတ်ကြတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ အဲဒါကိုက ကောင်းတဲ့အလားအလာလို့ မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီအခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ တချို့ က ဖိအားပေးတာတွေကို ဆက်ပြီးလုပ်သင့်တယ်။ တိုးမြှင့်သင့်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ တချို့ ကလည်း အဲဒါတွေ လုပ်နေကြခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းကို အဟန့်အတား ရောက်ရဖြစ်တယ်လို့ နှစ်ဖက်အယူအဆတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ကို အကြံပေးချင်ပါသလဲ။ ဖိအားကို ဆက်ပေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါသလား။ ဖိအားကို ဒီအချိန်မှာ ရပ်ဆိုင်းထားသင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါသလား။
မောင်ဝံသ ။ ။ ပြည်တွင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးနေကြပြီ။ ပြေပြေလည်လည် ကြိုးစားနေကြပြီ။ ဒီအခြေအနေတွေကို ထည့်စဉ်းစားပြီး ရှေ့ တိုးပြီး ဖိအားပေးသင့်သလား၊ မပေးသင့်သလားဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာက တခုခုကို မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့ ပေကပ်နေတာကို လုပ်လာအောင် တွန်းအားပေးတာ ဖိအားပေးတာ။ တခုခုလုပ်နေပြီ၊ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး မြင်နေရပြီ ဆိုရင်တော့ ဖိအားဆက်ပေးသင့်သလား၊ မပေးသင့်သလားဆိုတာကို ဆင်ခြင်ကြဖို့၊ သတိထားကြဖို့ အဲဒါမျိုး ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး စိန်ခေါ်မှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရဆဲ၊ ကင်တားနား သုံးသပ်
ကြာသပတေး, 25 သြဂုတ် 2011
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး တိုးတက်မှု တချို့ကို မြင်တွေ့ရသလို သူ့ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေနပ် အားရတယ် ဆိုပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကတော့ စိုးရိမ်စရာ အဆင့်နဲ့အတူ ဆက်လုပ်စရာတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား (Mr. Tomas Ojea Quintana) က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ သီးခြား လွတ်လပ်ပြီး အများယုံကြည် လက်ခံတဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေကို အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို လာရောက် စုံစမ်းခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ဒီနေ့ညနေ ရန်ကုန်က မပြန်ခင် လေဆိပ်ထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အတွင်းမှာ အခုလို မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီနေ့ညနေ ၆ နာရီခွဲကနေ တနာရီနီးပါးကြာ မစ္စတာ ကင်တားနား ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်ထဲက ဆွေးနွေးမှု အခြေအနေ တော်တော်များများကို ရှင်းလင်း ပြောဆိုပြခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှု အဆင့်တချို့ကို တွေ့ရပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကတော့ စိန်ခေါ်မှုမှာ ရှိနေဆဲပဲလို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကနေ ၃ ရက်ကြာ သူ့ရဲ့ နေပြည်တော် ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ကြိုဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တချို့အပြင် ထောင်တွင်းလေ့လာမှု အခြေအနေတွေ ပေါ်မှာလည်း အပိုင်းလိုက်စီ ရှင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး အစီအစဉ်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးဟာ မဖြစ်မနေ အဆင့်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့အတူ ဒါမှလည်း ဒီမိုကရေစီဘက်ကို တကယ်ပြောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံနိုင်စရာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း သူက ပြောသွားပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတာမို့ ဒီကိစ္စကို အထူးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ နေထိုင်ရာ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ သင်ကြားဖို့ လိုအပ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
“ဒါ့အပြင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတွေ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရ စီမံကိန်းတွေကြောင့် စစ်တပ်က အိုးအိမ် မြေယာ သိမ်းပိုက်မှုတွေ ရှိနေတာတွေ တွေ့ရတာမို့ ဒီကိစ္စမျိုးတွေကို အစိုးရက သေသေချာချာ အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုအပ်သလိုပဲ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေ အတွက်ပါ စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။”
အခုလို ပြောပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေအပြင် သူ အင်းစိန်ထောင်တွင်း သွားစဉ် ကြားသိခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့ရဲ့ ပြောပြချက်အရ စစ်ကြောရေး စခန်းတွေက နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုတွေ၊ အစားအစာ မစားခိုင်းတာတွေ၊ မအိပ်ခိုင်းတာတွေအပြင် ခန္ဓာကိုယ် မီးရှို့တဲ့ အကြောင်းတွေကို သူသိခဲ့ရသလို အကျဉ်းသားတွေကို စစ်တပ်အတွက် ပေါ်တာ အသုံးပြုမှုတွေကလည်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တခါ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့ဟာ မိသားစုနဲ့ ဝေးလံတဲ့ နယ်ထောင်တွေကို ရွှေ့ပြောင်းခံရတာမို့ မိသားစုဝင်တွေဟာ ပုံမှန် အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါး မပို့နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာလည်း စိုးရိမ်စရာ အဆင့်မှာ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေအပြင် တိုင်းရင်းသား ဒေသအတွင်းမှာ ကြုံနေရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေသလို ဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ညနေပိုင်း မစ္စတာ ကင်တားနား ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲထဲက အဓိက အချက်တချို့ကတော့ သူ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးဖို့ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေဆီမှာ တောင်းဆိုခဲ့သလို ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခံရမှုတွေ၊ အဓမ္မလုပ်အားပေး စေခိုင်းမှုတွေ အကြောင်းကိုလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားပြီး တိုင်းရင်းသား ဒေသက ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့အတူ အရပ်သားတွေ အပေါ်မှာ သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း သူ ပြောသွားပါတယ်။
တခါ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတွေမှာ အခက်အခဲ ရှိနေသလို တရားစီရင်ရေးပိုင်း ဆိုင်ရာမှာလည်း ဘက်မလိုက်ဘဲ တရားစီရင်မှုရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ လိုသေးတယ်လို့လည်း ထောက်ပြသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ သီးခြား လွတ်လပ်ပြီး အများလက်ခံ ယုံကြည်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေကို အချိန်မဆွဲဘဲ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်း မစ္စတာ ကင်တားနားက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံ သွားရောက်ဖို့ ပြင်
သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama) အစိုးရက ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ် (Derek Mitchell) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင် သွားရောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မစ္စတာ မစ်ချဲလ် သွားရောက်တဲ့အခါ အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှု ရုပ်သိမ်းရေး၊ မရုပ်သိမ်းရေးကိစ္စ အပါအ၀င် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ တချို့က မျှော်လင့်နေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မနန္ဒာချမ်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ရဲ့ ပထမဆုံး မူဝါဒရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင်မှာ သွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကို ပြောဆိုဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗစ်တိုးရီးယား နူလန်း (Victoria Nuland) က အင်္ဂါနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အတွင်းမှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“သံအမတ်ကြီး ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ် ဒီတပတ်ကစပြီး နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံ မူဝါဒဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါပြီ။ သူဟာ အမေရိကန် အစိုးရအတွက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တခြား သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေကို ဆက်သွယ်ရာမှာ အဓိက တာဝန်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အခွင့်အလမ်း သာတာနဲ့ အစောဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကို သွားမှာပါ။ သူ ဘယ်တော့လောက် သွားနိုင်မယ် ဆိုတာကိုလည်း မကြာခင်ရက်တွေမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။”
မစ္စတာ မစ်ချဲလ်ဟာ တရုတ်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး အရင်က ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဒု-လက်ထောက် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် အာရှဒေသ အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်းရှိသူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ဒီရာထူးအတွက် အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ကနေ အခုလဆန်းမှာ အတည်ပြုခဲ့တာပါ။
အမေရိကန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားရေးတွေအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှု မူဝါဒကို ကျင့်သုံးသလို တပြိုင်တည်းမှာပဲ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူဝါဒကိုလည်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတချို့ ရှိခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာတော့ အမေရိကန်က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပွင့်လင်းပြီး မြင်သာမှုရှိတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိတာကို ကျမတို့ အားပေးပါတယ်။ သူ သွားနိုင်လာနိုင်တာ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုနိုင်တာတွေကို အားပေးပြီး ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။”
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗစ်တိုးရီးယား နူလန်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရ လက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အဲဒီလို နှစ်လမ်းသွား မူဝါဒ ကျင့်သုံးနေတာကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လက်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ မဖြစ်မချင်း အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ မရုပ်သိမ်းသင့်သေးဘူးလို့ ပါတီပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ အတိုင်းပါပဲဗျာ။ တဘက်က Sanction၊ တဘက်က Engagement၊ ဒီ Engagement ကို ပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းဖို့ပဲ ရှိမှာပါ။ Sanction နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေက ဘာကြောင့် Sanction ချသလဲ၊ အဲဒီ ချခဲ့တဲ့ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ ဟာတွေကရော ပြည့်သွားပြီလား၊ ဒီအပေါ်မှာ တည်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲလာရင်တော့ ရုပ်သိမ်းကြရမှာပေါ့။ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲခြင်း ရှိမရှိဆိုတာ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
ဒါပေမဲ့လို့လည်း အဲ့ဒီလို ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ NDF အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုကတော့ အခြေအနေတွေဟာ အရင်လို မဟုတ်ဘဲ တစုံတရာ တိုးတက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒဏ်ခတ်မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသင့်ပြီလို့ မစ္စတာ မစ်ချဲလ် ရောက်လာတဲ့အခါ ပြောဆိုမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပါတီ ပြောခွင့်ရသူ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောဆိုပါတယ်။
“အခြေအနေက ပြောင်းသွားပြီလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့တောင်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားပြီဆိုတော့ အပြောင်းအလဲ တခုဆီ ဦးတည်နေတဲ့အခါ Sanction ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းအားဖြင့် ကောင်းတဲ့ဘက်ကို တွန်းအားပေးရာ ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်။ အဲဒါနဲ့ တဆက်တည်းမှာပဲ လွှတ်တော်ထဲမှာ စီးပွားရေး ဥပဒေတွေကို စီးပွားရေး Mismanagement တွေ လျော့ပါးသွားအောင်၊ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် Cronyism တွေ လျော့ကျသွားအောင်၊ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုတွေ မရှိတော့အောင် ဆောင်ရွက်မယ့်ဟာတွေ ရှိနေပြီမို့ တဘက်ကလည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ တော်ပြီလို့ ကျနော် ပြောမှာပါပဲ။”
ပြီးခဲ့တဲ့တပတ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ကလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော်အမတ် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဂျွန်ကယ်ရီ (John Kerry) ရဲ့ အကြံပေးအရာရှိ အက်ဒ်မန် ထရီဘာတီဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး NLD အပါအ၀င် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြတဲ့ ပါတီ ၈ ခုက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါ တွေ့ဆုံပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေနဲ့ အစိုးရသစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားတွေကို မေးမြန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
In Yangon, I held fruitful discussions onarange of important human rights issues with Daw Aung San Suu Kyi. I also conductedavisit to Insein Prison where I met with seven prisoners of conscience. Also in Yangon, I met with representatives of civil society organizations, former prisoners of consience, and members of the United Nations Country Team, whom I thank for the support provided to me during my mission. I also briefed the diplomatic community and heldameeting with all director-generals of different ministries at the conclusion of my mission.
I am encouraged that Parliament has begun exercising its powers within the framework of the Constitution. For instance, Government ministers appeared before it to answer questions. Parliamentary debates were covered by the official media. Further various committees were formed, including notably the Fundamental Rights, Democracy and Human Rights Committee. Substantively, Parliament has consideredahost of important issues relevant to the promotion and protection of human rights, including land tenure rights and issues of land confiscation, the issue of registering associations and other local organizations, the need for registration of trade unions, discrimination against ethnic minorities in civil service recruitment, the need for teaching of ethnic minority languages in schools in minority areas, the question of amnesty to Shan political prisoners, and the issue of granting national identification cards to the Rohingyas. I note issues were also debated in this current session of Parliament, including the provision of medicines to hospitals, the rebuilding of primary schools in certain constituencies,aprivate school registration bill, and environmental conservation.
At the same time, I note the strong need to enhance the capacity and functioning of this new institution and of its members. Many interlocutors from all sectors highlighted this need as well. Accordingly, I strongly encourage the Parliament to proactively seek cooperation and assistance from the international community in this regard. Also crucial is the need to clarifyanumber of the Parliament’s internal rules and procedures, including establishing clear rules governing parliamentary immunity.
I also met with the Union Election Commission where I was informed that by-elections for some 40 Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw and State or Regional Hluttaw seats will be held later this year. I emphasized the need to learn lessons from the November 2010 elections and called on the Election Commission to play an important role in ensuring that the upcoming by-elections are held inamore participatory and inclusive manner.
I observed that the capacity, independence and impartiality of the judiciary remain outstanding issues in Myanmar. Additionally, I noted that various laws and legal provisions that limit fundamental rights and contravene international human rights standards remain in existence. I am encouraged to hear thataprocess to review and possibly amend or revoke national legislation is underway, including during the current second regular session of Parliament. Given the Government’s stated commitment to respect for the rule of law, and in line with my previous recommendations on this issue, I hope for such efforts to be accelerated. I also encourage the Government to implement my previous recommendations on the judiciary and to undertake the series of measures I have proposed in order to enhance its independence and impartiality. I further encourage that technical assistance be sought in the area of capacity-building and training of judges and lawyers.
Finally, I continue to hold the belief that justice and accountability measures, as well as measures to ensure access to the truth, are fundamental for Myanmar to face its past and current human rights challenges, and to move forward towards national reconciliation. I would again encourage the Government to demonstrate its willingness and commitment to address these concerns and to take the necessary measures for investigations of human rights violations to be conducted in an independent, impartial and credible manner, without delay.
စကားလုံးပြောင်းပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအရေး လွှတ်တော်တင်
မျိုးသန့် | ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၄၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမရှိဟု မြန်မာအစိုးရမှ ငြင်းဆိုနေခြင်းကြောင့် "နိုင်ငံရေး အကျဉ်း
သား" ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို ရှောင်ကာ "ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ" စကားရပ်ဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်မြောက်ရေး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အဆိုကို ကြာသပတေးနေ့ လွှတ်တော်တွင်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်က တင်သွင်းလိုက်သည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်များက ပြောသည်။
"အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမရှိဘူးလို့ ပြောထားတဲ့အတွက် ကျနော်တို့က အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ
ပြောဆိုမှုတွေ ကြားထဲမှာ ကျနော်တို့က လိုက်ပြီးလုပ်နေရတဲ့သူတွေအဖို့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားက ဘောင်မဝင်မှာ
စိုးလို့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ ဆိုပြီးတော့ သုံးလိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်" ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးခိုင်မောင်ရည် က ဆိုသည်။
သင်္ကန်းကျွန်း လွှတ်တော် အမတ် ဦးသိန်းညွန့်သည် မတ်လအတွင်းပြုလုပ်သည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေးအဆိုကို တင်သွင်းခဲ့သေးသော်လည်း လွှတ်တော်တွင်း မဆွေးနွေးမီ မီဒီယာများသို့ ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာလွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသည်။
"နိုင်ငံရေအကျဉ်းသားမရှိဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးရာကို ပြောင်းအောင်လုပ်တာ နိုင်ငံရဲ့ ရေးရာကိုလုပ်တာ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားသမားချည်းပဲ။ အဲဒီအပြင် မတရားအသင်း ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်မှု၊ အစိုးရကို
အသရေ ပျက်အောင်လုပ်မှုတို့၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား ဖျက်ဆီးလိုသူများ ဥပဒေ၊ အဲဒါတွေ အားလုံးက
နိုင်ငံရေးပြစ်မှုလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအရ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးက ကျနော်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့ပဲ မြင်တယ်" ဟု ဦးသိန်းညွန့်က မဇ္ဈိမကို
ယခုနှစ် မေလ အတွင်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြစ်ဒဏ် လျော့ပေါ့မှုအမိန့်သည် လုံလောက်မှု မရှိသေးကြောင်းလည်း ဦးသိန်းညွန့်၏ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများအတွက် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဆိုတွင် ထောက်ပြတင်သွင်းသွားသည်။
ကြာသပတေးနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဦးသိန်းညွန့်ကပင် ၂၁ ရာစုနှင့် ညီညွတ်သော လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အာမခံသော အကျဉ်းထောင်အက်ဥပဒေ မူကြမ်းရေးဆွဲပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး
သို့ တင်ပြဆွေးနွေးရန် အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး သောကြာနေ့တွင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်မည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် ဦးသိန်းညွန့်၏ တရားရုံးများကို မထေမဲ့မြင်ပြုသည့် ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းရန်
အဆိုသည် လွှတ်တော်အမတ်များ၏ ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှုကြောင့် လွှတ်တော်က ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်အမတ်များမှ မေးခွန်း ၈ ခုကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့သေးသည်။
လွှတ်တော် အမတ်ဦးသိန်းညွန့်၏ အာဇာနည်နေ့ ဥသြဆွဲသံ မြန်မာ့အသံမှ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ယခုခေတ် သမယတွင် မော်တော်ယာဉ်စီးရေမှာ အလွန်များပြားလာသဖြင့် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ရလေအောင်ဟု မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားသွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်စီးရေ နှစ်သန်းကျော် ရှိသည်။
အင်းစိန် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအေးမြင့်၏ အမျိုးသား စာပေဆု ချီးမြှင့်ငွေ တိုးမြှင့်ပေးရန်ရှိ မရှိ မေးခွန်းကို မေးမြန်းရာ ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းက ကျပ်ငွေ ၆ သ်ိန်းမှ ၈ သိန်းအထိ တိုးမြှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ကွမ်ဟိန်း မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်နန်းဝါနု၏ တိုင်းရင်းသားများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို မေးမြန်းရာ ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ ကျောက်တံတား မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုးဝင်း၏ ပြည့်တန်ဆာခန်းများ အရေးယူပေးရေး
မေးခွန်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကိုမှ ပြည့်တန်ဆာနှင့် ပတ်သက်သည့် အမှု ၂,၉၅၂ မှုနှင့် စည်းကမ်းချက်နှင့် မညီသည့် ကာရာအိုကေဆိုင်များမှ အမျိုးသမီး ၁,၅၉၁ ယောက်တို့ကို အရေးယူပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ကြာသပတေးနေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဒေါက်တာမြဦးမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်
ကျေးလက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တိုးမြှင့်ရေးအဆိုကို လွှတ်တော်မှ သဘောတူပြီး လာမည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်မှ လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ လေယာဉ် ပျံသန်းခွင့် မပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း
ကြာသပတေးနေ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများကို နံနက် ၁ဝ နာရီတွင်ကျင်းပကာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည်
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာရေး အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က RFA ကို ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ "အခုအချိန်မှာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံတော် အကျိုးအတွက် ကြိုးပန်းချက်တွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျမနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်အရ ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူအများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာရေး အတွက် ဦးတည်မှာပါ။"
"အခုအချိန်မှာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံတော် အကျိုးအတွက် ကြိုးပန်းချက်တွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျမနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်အရ ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူအများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာရေး အတွက် ဦးတည်မှာပါ။"
RFA က အပတ်စဉ် သောကြာ ညတိုင်း တင်ဆက်နေတဲ့ လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ် အတွက် သောတရှင် တဦးရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံမှုကနေ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ချန်လှပ်ထားခဲ့မှာလားလို့ တိုင်းရင်းသား တဦးက မေးမြန်းခဲ့တာကိုတော့-
"နိုင်ငံ အကျိုးအတွက် ဘာဘဲလုပ်လုပ် တိုင်းရင်းသားတွေကို ချန်ခဲ့ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးဟာ အမေတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက် အဖြစ် ရှိနေတာ အနှစ် ၂၀ ကျော်လာပါပြီ။ ပြောင်းလဲစရာ အကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး။ စပြီး နားလည်မှုယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ အဆင်မပြေစေမည့် ကိစ္စတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အပြန်အလှန် လေးစား သည်းခံစိတ်တွေ မွေးရမှာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အဆင်ပြေရေးကို ဦးတည်ပြီး အမြဲပြောဆို လုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။"
တခြား မေးခွန်းတခုကို ဖြေကြားရာမှာလည်း လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် မုချ အထောက်အကူ ပြုမယ်လို့ မိမိ ယုံကြည်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ သြဇာ အကြီးဆုံး အမျိုးသမီး တဦး အဖြစ် ကမ္ဘာကျော် စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းကြီး တစောင်ဖြစ်တဲ့ Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အခုလထုတ်မှာ ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်းရဲ့ နှစ်စဉ် စစ်တမ်းကောက် ထုတ်ပြန်တဲ့ သြဇာ အကြီးမားဆုံး ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ ၂၆ ဦးမြောက် သြဇာ အကြီးဆုံး အမျိုးသမီးကြီး တဦး အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးသား ဖော်ပြချက်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ လူ့အခွင့်ရေး လှုပ်ရှားသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ခမ်းနား ကြီးကျယ်တဲ့ နှစ်တနှစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အရပ်သား အစိုးရ အဖွဲ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တာဟာ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကနေ အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းနဲ့ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ၂၁ နှစ် အတွင်း နေအိမ် အကျယ်ချုပ်နဲ့ ၁၅ နှစ် နေထိုင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ၁၉၉၁ မှာ နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထား ပါတယ်။
Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ သြဇာ အကြီးမားဆုံး ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ ဂျာမန် ၀န်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာ မာကယ်က နံပတ် ၁၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က နံပတ် ၂ နဲ့ ထိပ်တန်းမှာရှိပြီး အိန္ဒိယ ကွန်ဂရက်ပါတီက ဆိုနီယာ ဂန္ဒီ၊ ထိုင်ဝမ်က လုပ်ငန်းရှင် ချားဝေါင်း၊ သြစတေလျ ၀န်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာ ဂေးလာ့ဒ်၊ တရုတ်နိုင်ငံက ချန်လီဝါး တို့လည်း ထိပ်တန်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Jack Layton အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၀မ်းနည်းကြောင...
အ မေ စု အ ကြောင်း ရိုက် ထား တဲ့ The Lady ရုပ် ရ...
တရုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ Sinhydro Bureau မှ ရိုက်က...
တကယ်တမ်း​ မတ်တတ်ရပ် ဆို​တော့​ လွှတ်​တော်ကိုယ်စား​လှ...
လူ့အခွင့်အရေး စိန်ခေါ်မှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်ေ...
စကားလုံးပြောင်းပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအရေး လွှတ်ေ...
မြန်မာပြည်သူတွေ အရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန...